कस्तो खानपानले रोगी बनाउँछ ?
> कस्तो खानपानले रोगी बनाउँछ ?
३० मंसिर २०७६, सोमबार १४:५२
हामी बाँच्नका लागि खानेकुरा खान्छौं । तर खानपानको सम्बन्ध प्राण धान्नुसँग मात्र छैन । शरीर स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त राख्नका लागि पनि उचित खानपानको आवश्यक पर्छ ।
सही, सन्तुलित र सुपाच्य खानेकुराले शरीरलाई निरोगी बनाउँछ । अर्थात रोग लाग्नबाट बचाउँछ । जवान र तन्दुरुस्त राख्छ । तर, असन्तुलित र खराब खानाले ठिक विपरित नतिजा दिन्छ । जब हामी खराब खानेकुरा सेवन गर्न पुग्छौं, क्रमस हाम्रो शरीर रोगको भण्डार बन्न थाल्छ । एकपछि अर्को रोग लाग्दै जान्छ । र, यस्तो अवस्था आउँछ कि हामीसँग खानका लागि सीमित कुराहरु मात्र बाँकी रहन्छ ।
यसको अर्थ स्वाद मेट्ने चक्करमा वा क्षणिक प्रलोभनमा खराब खानेकुरा सेवन गर्नु भनेको रोगलाई निम्तो गर्नु हो । जानेर वा नजानेर हामी यस्तै खानेकुरा खाइरहेका हुन्छौं । रेष्टुरेन्ट वा बाहिरको खानेकुरा मात्र होइन, घरभित्रै पनि हामी अस्वस्थ्यकर खानेकुरा बनाइरहेका हुन्छौं । त्यसैले खानेकुरालाई कसरी सही, सन्तुलित र सुपाच्य बनाउने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ ।
कतिपय खानेकुरा आफैमा गुणी हुन्छ । तर, त्यसलाई अर्को खानासँग मिश्रण गर्दा त्यो विषाक्त बन्छ । त्यसैले कुन खानेकुराको साथमा के खानुहुन्छ भनेर पनि जान्नुपर्छ । शरीरलाई आवश्यक सबै किसिमको पोषणका लागि थरीथरीका खानेकुरा खानुपर्छ । त्यसो भन्दैमा थरीथरीका खानेकुरा एकसाथ खानहुन्छ भन्ने होइन ।
एक पटक भोजन गर्दा धेरै थरी मिश्रणको खानेकुरा पनि गर्न हुँदैन भनिन्छ । त्यसरी मिश्रण गर्दा पाचन प्रणालीमा बोझ पुग्छ । साथै कतिपय अवस्थामा विषाक्त पनि बन्छ । फूड प्वोइजनिङको समस्या त हामीले झेलिरहेकै छौ ।
खानेकुरा खानुको अर्थ हो, स्वस्थ्य हुन । निरोगी हुन । उर्जावान हुन । तर, खानपानको क्रममा गरिने केहि गल्तीले हामीलाई स्वस्थ्य होइन, बरु रोगी बनाउँछ ।
चर्को आगोमा पकाएको खानेकुरा
धेरैजसोले ग्यासमा खाना पकाउँछन् । चर्को आगो वा रापमा खाना पकाउनु राम्रो मानिदैन । त्यसले खानेकुरामा रहेको पोषण तत्व नष्ट गर्छ । रेष्टुरेन्टहरुमा खानेकुरा पकाउने क्रममा यसरी तेल तताउने गरिन्छ, जसबाट धूँवा निस्कन्छ । हेर्दा आकर्षक देखिने यस्ता पाककला स्वास्थ्यका लागि भने अनुकुल हुँदैन ।
पाकेको खानालाई पटक पटक तताएर खानु
धेरैजसोले पाकिसकेको खानेकुरालाई पटक पटक तताएर सेवन गर्छन् । अहिले पि|mजको प्रचलनले त यसलाई झनै बढवा दिएको छ । पाकिसकेको खानेकुरा पुन आगोमा तताउँदा त्यसमा रहेको पौष्टिक तत्व नष्ट हुने मात्र होइन, त्यो विषाक्त बन्छ । अर्थात हामी खानेकुरासँगै विष सेवन गर्न पुग्छौ ।
डिप फ्राई गरेर खानु
कुनैपनि खानेकुरा डिप फ्राई गरेर सेवन गर्नु भनेको पेटको रोग निम्त्याउनु हो । डिप फ्राई गरेको खानेकुरा जिब्रोलाई मिठो त लाग्छ, पेटमा गएपछि त्यसले नराम्रो असर गर्छ । अझ पेट सम्बन्धी समस्या भएका, पाचन प्रणाली कमजोर भएका, ग्याष्ट्रिकका रोगी, मधुमेह, उच्च रक्तचापको रोगी, पायल्सका रोगीले यसरी डिप फ्राई गरेको खानेकुरा खानै हुँदैन ।
काँचो र पाकेको मासुलाई एकै ठाउँ राख्नु
काँचो र पाकेको मासुलाई एउटै प्लेट वा भाँडामा राख्नु हानिकारक हुन्छ । अर्थात मासु वा माछालाई पकाउनुअघि जुन प्लेटमा राखिएको हुन्छ, पकाइसकेपछि पनि सोहि प्लेट प्रयोग गरिन्छ । हतारमा वा बेवास्ता गर्दा यस्तो गल्ती हुन्छ । किनभने काँचो मासुमा केहि ब्याक्टेरिया हुन्छ जो सजिलै पकाएको मासुमा सर्न सक्छ ।
खानेकुरा सन्तुलित हुनुपर्छ
एकैथरी खानेकुराले मात्र शरीरका लागि चाहिने पोषण तत्व आपूर्ति हुन सक्दैन । त्यसका लागि भिन्न भिन्नै प्रकृतिको खानेकुरा खानुपर्छ । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम, आइरन, फाइबर आदि जस्ता तत्व एकै किसिमको खानेकुराबाट प्राप्त हुँदैन । कुनै पोषक तत्वका लागि चामल आवश्यक हुन्छ भने कुनैको लागि सागपात, कुनैको लागि फलफूल आवश्यक हुन्छ भने, कुनैको लागि ड्राइ फ्रुट्स ।
अतः यी खानेकुराहरु दिनभरमा निश्चित तालिका बनाएर सेवन गर्न सकिन्छ । एकसाथ भात, फलफूल, ड्राई फ्रुट्स, ग्रीन टि, सागपात खानुपर्छ भन्ने होइन । दिनभरको खानपान तालिकामा यत्तिका खानेकुरा समेट्न सकिन्छ । यस किसिमको सन्तुलित भोजनले शरीर सधै जवान, निरोगी र तन्दुरुस्त हुन्छ ।
३,३४२ काे परीक्षण गर्दा ४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टिः देशभर ५०० भन्दा कम संक्रिय संक्रमित
बालबालिकालाई टाइफाइड विरुद्धको खोप लगाउन कालीगण्डकी गाउँपालिकाको अपिल
२२ बर्षको उमेरमै अस्पताल सञ्चालक समितिमा नियुक्त वैरागी कान्छो
कर्णालीमा कोरोनाको तेस्रो लहर रोकथामको पूर्वतयारी : ७ करोडभन्दा बढी रकम व्यवस्थापन
काठमाडौंमा आजदेखि बुस्टर डोज दिन सुरु‚ १७ ठाउँबाट लगाउन सकिने
नयाँ अध्ययन : १० करोड मानिसमा कोभिडको दीर्घकालिन लक्षण
अध्यक्ष थापाको पहिलो निर्णय : कालीगण्डकी गाउँपालिका भित्रका सबै युवा सिपयुक्त हुने
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एमाले विजयी
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–६ मा एमालेको प्यानल विजयी
स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका ३ मा एमालेको प्यानल विजयी
कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एमालेको मोटरसाइलकल ¥याली
नेकपा एमाले नगर प्रमुखका उम्मेदवार धनेन्द्रराज घिमिरेका यस्ता छन् योजना ।
शासक होइन, सेवक भएर काम गर्ने छु : थापा
© 2019 - 2022 Copyright KhabarKhurak by MeroHosting | All Rights reserved.